Vanyori vashanu vane kusagadzikana kwepfungwa | Zvazvino Zvinyorwa
Maererano neongororo ichangobva kuitwa, vanyori kunyanya uye vanhu vakazvipira kune hunyanzvi kazhinji (vanyori, vaimbi, vanyori, nezvimwewo), vari mikana yekutambura nekumwe kunetseka kwepfungwa. Mazhinji ezvinetso izvi anokonzerwa nekushushikana uye kushushikana kwekupedzisa basa nenguva uye nekufemerwa kuti uite kudaro.
Munguva yese, kwave nevazhinji vanozivikanwa vanyori vakatambura nematambudziko aya uye vamwe vanobva kudoro nemishonga. Kubva pakati pavo vese isu takasarudza izvi 5 vanyori vane kusagadzikana kwepfungwa.
Matambudziko epfungwa aHemingway akange atonyorwa mumageneti ake. Mamwe madzitateguru ako akatambura kuora mwoyo uye vazhinji vavo vakapedzisira vazviuraya.
Munyori iye pachake wemabasa anoshamisa se "Mudhara negungwa", akadaro achitambura Bipolar kusagadzikana, kushushikana, psychosis uye aive nehunhu hwehunhu muhunhu hwake. Kuongororwa kuti pamwe kwakafungidzira mafiro angaita munyori mukuru uyu. Tinofanira kurangarira kuti Ernest Hemingway akafa musi waChikunguru 2, 1961, kuzviuraya nepfuti yake.
A Virginia Woolf mutambo uyu waizomisikidzwa kubva pazera diki nekutambura kushungurudzwa pabonde. Dambudziko raakange asingakwanise kukunda uye kuti pazera ramakore makumi maviri raizomukonzera asingaverengeke kuputsika kwekutya.
Yakanga iri kumagumo enhoroondo yake yekupedzisira, "Pakati pezviito" muna 1941, apo dambudziko rakakura rakamudya mukuora mwoyo kwakadzika. Akarasikirwa neimba yake yeLondon muHondo Yenyika II. Iyo 28 March we1941, aizozadza homwe dzake nematombo kuti azopinda murwizi padyo nepamba pake opedzisira anyura.
Kurwara kwake, Bipolar kusagadzikana, yakanga iine majini. Sisi vake vakapedza huzhinji hwehupenyu hwavo muzvipatara zvepfungwa, uye mushure mekuita zvisina kunaka lobotomy, akaremara kweupenyu hwese. Kutya kwaTennessee Williams kwekuita senge hanzvadzi yake, zvakaita kuti ashandise zvinodhaka uye doro.
Zvakare kufa kwemumwe wake ane rudo, kwakawedzera kusagadzikana kwake uye kushungurudzika, zvichidaro zvichiwedzera kunwa kwezvinodhaka zvinodhaka uye doro. Akaiswa muchipatara kakawanda nekuda kwekushushikana uku uye kwenguva yakareba.
Uyu munyori mukuru wechiGerman, musiki wemabasa makuru senge "Siddhartha", akagamuchirwa nevabereki vake mune kliniki yepfungwa pazera remakore gumi nemashanu. Zvikonzero: aipandukira, uye akachinjisa zvikamu zvekusika kukuru, kushinga uye kusimudzirwa nevamwe nekusazeza uye kusagadzikana.
Mushure meizvi, aifanirawo kuenda kuna chiremba wezvepfungwa apo, pakati peHondo Yenyika I, akazviwana ave pakati pemakakatanwa ezvematongerwo enyika, mukadzi weschizophrenic uye mwanakomana anorwara. Zvakadaro, akakwanisa kuzvikunda uye kupfuura dambudziko.
Kupera kwemunyori uyu kwakanyorwa naiye: "Soy katurike uye handigoni kuzvipira kuzviuraya, asi Ndine chinangwa chendimwe mismo kusvikira wafa".
Saka zvakapera, pazera re 47 makore, nekubuda ropa mukati, kunokonzerwa necirrhosis yechiropa, mhedzisiro yehupenyu hwese hunonwa doro. Akafa sezvaaida, achinyora pachigaro chake chaaida uye achinwa girazi rewhisky nedoro remumera.
Wanga uchiziva magumo anosiririsa evamwe vevanyori ava? Wanga uchiziva nezve ake matambudziko epfungwa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » 5 vanyori vane kusagadzikana kwepfungwa
Rubèn Darío Becerra Roa akadaro
Vanyori vanoratidzirwa kumatambudziko epfungwa, kungave nekugara nhaka kana nekunzwa kune chokwadi chakakasharara chehupenyu ... Dzimwe nguva ivo vanowanzo nyonganisa chokwadi nefungidziro, kana zvinopesana, izvo zvine mhedzisiro yakaipa kuenzanirana kwepfungwa ...
Pindura Rubèn Darìo Becerra Roa
Asdrubal Cruz akadaro
Zvinonakidza uye panguva imwe chete zvinosuwisa kuona izvo vatambi vakatambura, izvo zvinoratidza hunhu hwavo mune hunyanzvi. Ini ndinofunga kuti havafanirwe kutongwa asi vanofanirwa kuvabatsira kukunda matambudziko aya kuti vagowedzera hupenyu hwavo uye varambe vachiratidza hunhu hwavo uhwo mamesi anotumira kwavari.
Yakanaka peji rako nenzira 😉
Pindura Asdrubal Cruz
Vanessa, zita rerudo uye zvinyorwa.